DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA NVIDIA GEFORCE 8600 GT - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọọ ọkwọ ụgbọala maka GeForce 8600 GT
A naghị akwado kaadị eserese nke a na-atụle n'ime ihe ndị a na-akwadoghị. Mana nke a apụtaghị na ngwanrọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ya enweghị ike ibudata ya. Ọzọkwa, ọtụtụ ụzọ nwere ike ime ya, anyị ga-ekwukwa banyere nke ọ bụla n'ime ha.
Usoro 1: Ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na ngwanrọ na akụrụngwa zuru ezu, nakwa dị ka nke a ga-echebe na-echebe gị pụọ na nje virus nwere ike, ịkwesịrị ịmalite ịchọ onye ọkwọ ụgbọala site na saịtị ahụ. N'ihe banyere GeForce 8600 GT, dịka ọ bụla ngwaahịa NVIDIA ọzọ, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
Soro njikọ dị n'elu ka ị gaa na peeji ọchụchọ ma jupụta n'ọhịa ndị e gosipụtara dị ka ndị a:
Ụdị Ụdị: Na-akwado;
Ngwaahịa: GeForce 8 Usoro;
Ezigbo Ulo: GeForce 8600 GT;
Usoro usoro: Windowsonye njirimara na bitness kwekọrọ na nke i tinyere;
Mgbe o juputara n'ubi dika egosiputara na ihe omuma anyi, pia "Chọọ".
N'otu oge na peeji na-esonụ, ọ bụrụ na-ịchọrọ, nyochaa ozi zuru ezu banyere onye ọkwọ ụgbọala ahụ. N'ihi ya, na-ege ntị na paragraf "E bipụtara:", enwere ike ịkọwapụta na ngwanrọ kachasị ọhụrụ maka kaadị vidiyo a jụrụ na 12/14/2016, nke a na-egosikwa na njedebe nkwado. N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịmatakwu atụmatụ nke ntọhapụ (ọ bụ ezie na edepụtara ozi a na Bekee).
Tupu ịmalite ibudata, anyị na-akwado ka ị gaa na taabụ "Ngwa Nkwado". Nke a dị mkpa iji chọpụta nhazi nke ngwanro na ebudatara na ihe ntanetị vidiyo kpọmkwem. Ịchọta ya na ngọngọ ahụ "GeForce 8 Usoro", ị nwere ike pịa bọtịnụ n'enweghị nsogbu "Download ugbu a"gosipụtara na oyiyi ahụ dị n'elu.
Ugbu a, gụọ ihe dị na License License, ma ọ bụrụ na ọchịchọ dị otú ahụ dị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike ịga ozugbo na nbudata - dị nnọọ pịa bọtịnụ ahụ "Nabata ma budata".
Nbudata software ga-amalite na akpaghị aka (ma ọ bụ, dabere na ihe nchọgharị na ya, ga-achọ nkwenye na ụzọ iji chekwaa faịlụ ahụ), ọganihu ya ga-egosikwa na nchịkọta nchịkọta.
Gbaa faịlụ ahụ a na-arụ ọrụ mgbe ebudatara ya. Mgbe obere usoro nhazi, windo ga-apụta na-egosi ụzọ na ndekọ maka iwepu faịlụ software. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịgbanwe ya site na ịpị bọtịnụ ahụ n'ụdị folda, ma nke a anaghị akwado ya. Mgbe ị kpebiri na ịhọrọ, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe ahụ, usoro ahụ ga-amalite ozugbo na-ekpuchi faịlụ ndị ọkwọ ụgbọala.
N'azụ ya, a na-amalite usoro nyocha usoro os.
Ozugbo a na-enyocha usoro ahụ na kaadị vidiyo ahụ, ihe ederede License License ga-apụta na ihuenyo. Pịa bọtịnụ ahụ "BỤRỤ. BỤRỤ", ma ị nwere ike ịhụchalụ ọdịnaya nke akwụkwọ.
Ugbu a, ị ga-ekpebi na elekere nwụnye. Enwere nhọrọ abụọ:
Nhazi omenala (nhọrọ di elu).
N'okpuru onye nke ọ bụla, e nwere nkọwa zuru ezu. Ọzọ, anyị na-atụle kpọmkwem nhọrọ nke abụọ.
Na akara na-esote ihe kwesịrị ekwesị, pịa "Na-esote".
Ihe ọzọ na-esote bụ nkọwa na njedebe nke ntinye nhọrọ. Na mgbakwunye na ọkwọ ụgbọala a chọrọ, na windo ahọrọ (1), ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ndị ọzọ dị na ngwanrọ nke ga-arụ ma ọ bụ agaghị arụnye:
"Onye ọkwọ ụgbọala ọhụụ" - ọ gaghị ekwe omume ịjụ itinye ya, ọ dịghịkwa mkpa;
"NVIDIA GeForce Ahụmahụ" - ngwa nke na - eme ka mmekorita mmekorita di iche iche di na kaadị ndi ozo, na - eme ka ndi oru ugbo nwee oru. Anyị na-akwado ịwụnye ya, ọ bụ ezie na ọ gaghị achọta mmelite maka otu ụdị.
"Software nke System PhysX" - ngwanrọ maka maka ịrụ ọrụ kaadị vidiyo dị mma na egwuregwu kọmputa. Jiri ya mee ihe.
"Gbaa ngwaọrụ dị ọcha" - nke a abụghị site n'onwe ya. Site na ịpị ya, ịnwere ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ dị ọcha, na-ehichapụ nsụgharị niile gara aga na faịlụ data ọzọ echekwara na usoro.
Ndị a bụ isi ihe, ma e wezụga ha na windo "Ntọala na ntinye aka" enwere ike ịnwe ndị ọzọ, nhọrọ iji wụnye ngwanrọ:
"Audio Driver HD";
"Ọhụụ 3D ọhụụ".
Mgbe ị kpebiri na components software nke ị na-eme atụmatụ ịwụnye, pịa "Na-esote".
Nke a ga-amalite usoro NVIDIA software nhazi, n'oge ngosi nyochaa nwere ike gbanwee ọtụtụ ugboro.
Mgbe ịchisịrị usoro ahụ, karịa kpọmkwem, nke mbụ ya, ọ ga-adị mkpa iji malitegharịa kọmputa ahụ. Mgbe ị mechara ngwa niile na ichekwa akwụkwọ, pịa Megharia Ugbu a.
Ozugbo usoro ahụ malitere, ọkwọ ụgbọala ga-aga n'ihu, n'oge na-adịghị anya, windo ga-apụta na ihuenyo na akụkọ banyere ọrụ a rụrụ. Pịa bọtịnụ ahụ "Mechie", ma ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwekwara ike iwepu ihe ndị ahụ "Mepụta ọkpụkpọ desktọọpụ ..." ma "Mwepụta NVIDIA GeForce Ahụmahụ". N'ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị jụ ịmalite ngwa ahụ, ọ ga-agba ọsọ na usoro ahụ ma nọgide na-arụ ọrụ na ndabere.
Na nkọwa a nke usoro mbụ, nke na-enye ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị ndịadịadị NVIDIA GeForce 8600 GT, enwere ike ịtụle ya kpamkpam. Anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na nhọrọ ndị ọzọ maka mmejuputa usoro a.
Usoro 2: Ọrụ pụrụ iche na saịtị ahụ
Ọ bụrụ na ị na-esonyere na mmejuputa nke Mbụ Ụzọ, mgbe ahụ mgbe ịpị njikọ ahụ gosipụtara ná mmalite, ị nwere ike ịhụ na anyị họọrọ Nhọrọ 1. Nke abụọ, nke egosipụtara n'okpuru ogige na sistemụ vidiyo vidiyo, na-enye gị ohere wepu usoro dị otú a na-adịghị agbanwe agbanwe mgbe niile ntinye ederede nke njirimara nke ngwaọrụ ahụ. Nke a ga - enyere anyị aka ọrụ NVIDIA weebụ weebụ pụrụ iche, ọrụ anyị na - atụle n'okpuru.
Rịba ama: Iji jiri usoro a, ịkwesịrị Java kachasị ọhụrụ, ozi gbasara mmelite na ntinye nke ị nwere ike ịgụ na ntuziaka dị iche na weebụsaịtị anyị. Tụkwasị na nke ahụ, ihe nchọgharị ndị dabeere na engine Chromium adịghị adabara ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala. Ngwọta kachasị mma bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ, ma ọ bụ Internet Explorer ma ọ bụ Microsoft Edge.
Gụkwuo: Otu esi edozi Java na kọmputa yana Windows
Ịpị na njikọ ahụ dị n'elu ga-amalite usoro nyocha ọkọlọtọ maka usoro na kalịnda gị. Chere ruo ọgwụgwụ nke usoro a.
Mgbe obere ego, ị nwere ike ịjụ iji Java, nye ikikere site na ịpị "Gbaa ọsọ" ma ọ bụ "Malite".
Ọ bụrụ na kama ịkọwa mpaghara nke kaadị vidiyo, ọrụ weebụ na-akpali gị ịwụnye Java, jiri njikọ na usoro ihe omume ahụ site na ihe edeturu n'elu iji budata ya na njikọ dị n'okpuru ebe a na ntụziaka nwụnye. Usoro ahụ dị mfe ma na-arụ ọrụ dịka otu algorithm dị ka ntinye nke usoro ọ bụla.
Mgbe ngwusiri ahụ gwusiri, ọrụ ahụ ga-ekpebi njirimara ekwentị nke eriri vidiyo. Jide n'aka na n'okpuru ubi "Ngwaahịa" Gwa GeForce 8600 GT, wee pịa "Download" ma ọ bụ "Download".
Nbudata mmemme ahụ ga-amalite. Mgbe emechachara, malite ya ma mezue nwụnye, na-ezo aka na ntụziaka site na usoro gara aga, ọ bụrụ na ọ dị mkpa (paragraf nke 5-11).
Dịka ị pụrụ ịhụ, nhọrọ a maka ọkwọ ụgbọala kaadị vidiyo dị mfe karịa nke malitere isiokwu anyị. Ọ bụ ihe dị ịrịba ama nke mbụ n'ihi na ọ na-enye anyị ohere ịchekwa oge ụfọdụ, na-azọpụta anyị pụọ n'ịbanye na njedebe niile nke kaadị vidiyo ahụ. Ihe ọzọ na-enweghị mgbagwoju anya bụ na ọrụ NVIDIA dị n'ịntanetị ga-aba uru ọ bụghị naanị na GeForce 8600 GT, kamakwa mgbe a na-amaghi ihe ọmụma zuru oke banyere onye ntanetịja.
Hụkwa: Otu esi achọpụta ihe ngosi NVIDIA eserese ngosi
Usoro 3: Firmware
Mgbe ị na-atụle "Nhazi usoro"kọwara na ụzọ mbụ nke isiokwu a, anyị kwuru banyere NVIDIA GeForce Experience. Ngwa ngwa a na-enye gị ohere ịmepụta usoro ihe omume na eserese na egwuregwu kọmputa, mana nke a abụghị naanị ya. Akụrụngwa a (site na ndabara) na-amalite na mmalite nke usoro ahụ, na-arụ ọrụ na ndabere na kọntaktị NVIDIA mgbe niile. Mgbe ọhụụ ọhụrụ nke ọkwọ ụgbọ ala ahụ gosipụtara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, GeForce Experience na-egosipụta ọkwa kwekọrọ na ya, mgbe nke ahụ gasịrị ọ nọgidere na-aga na interface ngwa, budata, wee wụnye ngwanrọ ahụ.
Ihe dị mkpa: niile n'otu usoro mbụ ahụ anyị kwuru maka njedebe nkwado maka GeForce 8600 GT, ya mere usoro a ga-aba uru nanị ma ọ bụrụ na usoro ahụ nwere onye na-amaghị akwụkwọ maọbụ onye torola eto, dị iche na nke ahụ dị na NVIDIA website.
Gụkwuo: Imelite ọkwọ ụgbọala Video Kaadị Jiri Ahụhụ GeForce
Usoro 4: Mmemme pụrụ iche
E nwere ọtụtụ ihe omume pụrụ iche, ọkachamara (ma ọ bụ isi) ọrụ bụ iji wụnye ndị na-efu ma melite ndị ọkwọ ụgbọala oge ochie. Ngwaọrụ dị otú a bara uru karịsịa mgbe ịmịgharịrị sistemụ arụmọrụ, dịka ọ na-enye ohere n'ụzọ nkịtị na ntinye pịa iji kwadebe ya na ngwanrọ dị mkpa, yana ya nwere ike itinye ya dị mkpa maka nchọgharị ọ bụla, ọdịyo, vidiyo. Ị nwere ike imata ihe omume ndị dị otú ahụ, ụkpụrụ ndị bụ isi nke ọrụ ha na arụrịta ọrụ n'ime edemede dị iche iche na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Software maka ịwụnye ma na-emelite ọkwọ ụgbọala.
Kedu ngwanrọ ngwanrọ nke ndị na-egosi na ihe dị na njikọ ahụ, họrọ, ọ bụ gị. Anyị, n'aka nke anyị, ga-akwado ịṅa ntị na DriverPack Solution, usoro ihe omume nke kachasị elu nke ngwaọrụ ndị akwadoro. Enwere ike iji ya, dịka ụdị ngwaahịa niile a, na NVIDIA GeForce 8600 GT, kamakwa iji hụ na arụ ọrụ ọ bụla nke ihe arụ ọrụ PC gị.
Gụkwuo: Otu esi eji DriverPack Solution melite ndị ọkwọ ụgbọala
ID ma ọ bụ ihe nchọpụta aha bụ aha aha pụrụ iche nke ndị na-emepụta nyere ngwaọrụ. Ịmata nọmba a, ịnwere ike ịchọta ọkwọ ụgbọala dị mkpa. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọta ID n'onwe ya, nke abụọ bụ ịbanye ya na saịtị ọchụchọ na weebụsaịtị pụrụ iche, wee budata ma wụnye. Iji lee GeForce 8600 GT ID, biko kpọtụrụ "Onye njikwa ngwaọrụ", chọta kaadị vidiyo n'ebe ahụ, mepee ya "Njirimara"gaa "Nkọwa" ma ugbua ahọrọ ihe "ID ID". Mee ka ọrụ gị dị mfe ma nyezie ID nke ihe ntanetị ndịna-emeputa a na-atụle n'isiokwu a:
PCI VEN_10DE & DEV_0402
Ugbu a dezie nọmba a, gaa otu n'ime ọrụ weebụ iji chọọ onye ọkwọ ụgbọala site na ID, ma tinye ya n'ime igbe ọchụchọ. Kọwaa njirimara na omimi nke usoro gị, malite usoro ọchụchọ ahụ, wee họrọ ma budata usoro kachasị ọhụrụ nke ngwanro ahụ. Echichi na-enweta kpọmkwem otu ụzọ ahụ dị ka akọwapụtara na paragraf nke 5-11 nke usoro mbụ. Ị nwere ike ịchọpụta ebe ndị ahụ na-enye anyị ike ịchọọ ndị ọkwọ ụgbọala site ID na otu esi arụ ọrụ na ha site na akwụkwọ ntuziaka dị iche.
Gụkwuo: Otu esi achọta onye ọkwọ ụgbọala site na ID
Usoro 6: Ngwaọrụ System
N'elu, anyị na-akpọtụ aha "Onye njikwa ngwaọrụ" - ngalaba Windows OS dị. N'izo aka na ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịhụ ndepụta nke ngwaọrụ arụnyere na ejikọrọ na komputa, lee ozi zuru ezu banyere ya, ma melite ma ọ bụ wụnye ọkwọ ụgbọala ahụ. A na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe - chọpụta ihe ngwaike dị mkpa, nke dị na anyị bụ NVIDIA GeForce 8600 GT kaadị vidiyo, kpọọ menu ihe dị n'ime (PCM) na ya, họrọ ihe ahụ "Ọkwọ ụgbọala ọhụụ"na mgbe ahụ "Nchọgharị akpaaka maka ndị ọkwọ ụgbọala emelitere". Chere maka usoro nyocha ahụ iji gwụchaa, mgbe ahụ, gbasoo ngwa ngwa nke Wizard Wụnye.
Otu esi eji ngwá ọrụ "Onye njikwa ngwaọrụ" iji chọpụta na / ma ọ bụ melite ndị ọkwọ ụgbọala, ị nwere ike ịchọpụta na isiokwu dị iche iche anyị nwere, njikọ nke e depụtara n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ ngwaọrụ arụmọrụ
N'ịkọwa ihe niile dị n'elu, anyị na-ahụ na ibudata ma wụnye onye ọkwọ ụgbọ ala maka NVIDIA GeForce 8600 GT adapter vidiyo bụ usoro dị mfe. Ọzọkwa, onye ọrụ nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ nhọrọ iji dozie nsogbu a. Nke ịhọrọ bụ ihe gbasara onwe gị. Ihe bụ isi bụ ịchekwa faịlụ a ga - eji mebie ya, ebe ọ bụ na nkwado maka kaadị vidiyo a kwụsịrị na njedebe nke afọ 2016 ma n'oge na - adịghị anya, software dị mkpa iji rụọ ọrụ nwere ike ịkwụsị site na ịnweta ohere.